/ ngwaahịa / Hormones / Hydroxyprogesterone na-ekpuchi ntụ ntụ
SKU: 630-56-8. Category: Hormones
Hydroxyprogesterone na-ekpuchi ntụ ntụ bụ hormone steroid na-emepụta ihe yiri nke medroxyprogesterone acetate na megestrol acetate. Ọ bụ ihe ngosi ester nke 17α-hydroxyprogesterone nke a malitere site na acid caproic (hexanoic acid). A na-ere ahịa ahịa Hydroxyprogesterone n'okpuru akara aha MAKENA.
Inwale maka estrogen production ("Medical D and C").
1 nyochaa maka Hydroxyprogesterone na-ekpuchi ntụ ntụ
Hydroxyprogesterone caproate ntụ ntụ bụ ọgụgụ isi